Iwo akanyanya audios kudzoreredza mweya yako - Self Rubatsiro Zviwanikwa | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Dzimwe nguva mazwi akakwana anogona kukubatsira kuti ubve mune yakaoma mamiriro. Kana chimwe chinhu chiri mumusoro mako, chinova chinotenderera chausingakwanise kubuda machiri. Iwe pachako haukwanise kuwana nzira yekubuda nayo uye mazwi ako haana kukwana kudzikamisa kushushikana kwako. Kuti ikubatsire mune ino maitiro, yekukupa iwe maturusi aunoda kuti utarisane nematambudziko ehupenyu, zvakafanira kuti uve nerubatsiro, izwi rinokubatsira kuona dambudziko uye nekukupa iwo madhairekisheni ekuti uwane mhinduro.
Ndo zvese zvaunogona kuwana mu ma-self-help audios aunowana muchikamu chino. Nhasi kune nzira dzakasiyana dzekuwana iwo mazwi anokubatsira iwe kuona mwenje kumagumo kwetangi, mabhuku, mifananidzo, zvirevo kana sezvazviri, audios, zvinogadzirwa nenyanzvi kubatsira vanhu kuti vawane yakanakisa vhezheni yavo. Nekuti hazvisi zvekuve kugona pakati pevamwe, asi nezve kusimudzira simba reumwe neumwe.
Ipapo chete ndipo paunokwanisa kuzowana iwe uchifara zvizere uye wakasununguka newe. Nekuti pamwe izvo zvauri kutsvaga ndezvekushandura zvinhu zvehunhu hwako zvausingade, sekushomeka kwekuda, matambudziko mukumisidzana kune zvibereko nevamwe vanhu kana kugona kuwana mauri hunhu hunoita kuti uve nesimba pamberi pevamwe vanhu. Zvese izvi, unogona kudzidza nekushanda kuzvivandudza. Nekuti, kunyangwe munhu wega wega aine hunhu hwake uye hunhu hunovaita vakasarudzika uye vakasiyana, hunhu hwakaumbwa muhupenyu hwese uye zviitiko.
Hupenyu hwakafanana nerwendoDzimwe nguva zviitiko zvingasakwanise kuzadzisa zvaunotarisira uye iri rinogona kunge riri dombo rausingakwanise kutenderera. Nekudaro, hupenyu hunofanirwawo kudzidziswa kuhuita, semwana mucheche anofanira kudzidza kufamba, kudya kana kutaura. Kudzidza kubva panguva yega yega uye chiitiko chega chega, kutsvaga izvo zvakanaka mune yega mamiriro ezvinhu, zvinokubatsira iwe kurarama nehukuru hwakadzikama, uchinakidzwa nenguva dzakanaka. Zvakare nekuwana hupenyu kudzidza kubva kune isingafarire.
Nekudaro, iko kupihwa mune yekuzvibatsira-audios kwakakura kwazvo, izvo kutsvaga iyo inokodzera zvakanyanya zvaunoda nguva dzese inogona kukuremedza. Neichi chikonzero, muchikamu chino cheAudios unogona kuwana kurudziro yenyaya dzakananga, kuitira kuti zvive nyore kwauri kuti utore odhiyo inogona kukuita kuti uchinje hupenyu hwako.
Pamwe iwe unongoda kunzwa mazwi akakodzera, panguva yakakodzera, kubva kumunhu anoziva kuzvitaurira zvakanaka. Zvichida iwe uchawana hurukuro nezve kubudirira kana nezve makiyi ebasa rakabudirira, mazwi ehungwaru anokuendesa kuti uone kuti haufanire kugarisana nezvisingakufadze. Nekuti munhu wese anokwanisa kushandura izvo zvinhu zvisingavagutsi. Vamwe vanhu vanoziva kuti vane kiyi yekubudirira mumawoko avo, vamwe, kune rumwe rutivi, vanoda maturusi ekushandira pahunhu hwavo uye nekudaro vanoona zvese zvavanokwanisa kuita.
Tsvaga ma audios aunowana muchikamu chinoDzidza zvese nezve mararamiro, nezvenzira dzakanakisa dzekurarama hupenyu hwakazara uye hunofadza, chakavanzika chebudiriro yebasa, rudo kana nzira inoenderana zvinoenderana nezvinodiwa zvako. Iwe chete ndiwe unoziva zvaunoda, isu tinoisa ma audios, misangano, audiobooks uye ese marudzi ese zviwanikwa muruoko rwako kuti zvive nyore kwauri kuti uwane nzira yemufaro. Nekuti, zvinopesana neizvo vanofungidzira vangangofunga, mabhuku, ma audios kana akasiyana-siyana ekuzvibatsira rubatsiro haasi evasina kusimba, asi kune avo vanoziva kudzidza kubva kune vamwe.
19 Yemahara Yega-Inobatsira maAudio (kurarama zvirinani)
kubudikidza Daniel inoita 4 makore .
Ini ndinopa kwamuri aya gumi nemaviri mahara-ekuteerera ma audios. Zvinosanganisira hurukuro uye akanakisa ekuzvibatsira-mabhuku ehurukuro nezwi revanhu.
Audiobook "101 Nzira dzekushandura Hupenyu Hwako", naWayne Dyer
Bhuku diki redhiyo naWayne Dyer rakanzi 101 Nzira dzeKushandura Hupenyu Hwako. Chiedza kwazvo kuteerera kubva chete ...
Audiobook «Iyo Alchemist» naPaulo Coelho
Ndinokusiira odhiyo yebhuku «Iyo Alchemist» naPaulo Coelho akarondedzerwa nezwi remunhu (kwete robotic). Ndakakamurwa kuva…
Mudiki Muchinda (Audiobook)
Nhasi ndinokuunzira iro audiobook rebhuku rakamakidza hudiki hwangu uye zvirokwazvo iro revakawanda. Ndezve…
Zvakavanzika zvekubudirira kwehupfumi [AUDIO]
kubudikidza Daniel inoita 8 makore .
Ini ndaisaziva Raimon Samsó kusvika nhasi pandakawana kubvunzana kwavakaita naye. Zvinoita kunge ...
Audiolibro «Murume akasima miti»
kubudikidza Daniel inoita 10 makore .
Yakave nguva yakareba kubvira pandakawana chero audiobook yakakodzera kupinda mune runyorwa rweYoga-yekubatsira Mabhuku andakagadzira apfuura ...
Audiobook «Iyo Nzira yeMagic» naDeepak Chopra
Nebhuku iri redhiyo, «« Nzira yemashiripiti »naDeepak Chopra, iwe unozodzidza kutsvaga wako wemukati muroyi, iye anokwanisa ...
Audiobook: Wepasi Mutengesi Mukuru
Isu tinoramba tichiwedzera kune yedu runyorwa rweyangu-yekubatsira audiobooks ne "Wepasi Mukurusa Mutengesi" naOg Mandino, mumwe we ...
Audiolibro «Vaka chiroto chako», naLuis Huete
Ino nguva ndinokuunzira odhiyo yeinopfuura maminetsi makumi mana nepfumbamwe. Iri ibhuku raLuis ...
Audiobook: Ndiani atora chizi yangu?
Ndinokusiya uine ino classic yekuzvibatsira. Ndakanga ndisati ndamboiverenga kusvika nezuro pandakawana mukana wekuzviteerera….
kubudikidza Daniel inoita 11 makore .
Nhasi ndafunga kugadzira Podcast yangu yekutanga. Ndichaedza kugadzira podcast yezuva nezuva ingangoita maminetsi mashanu kuitira kuti ...